Iingxowa & ukhuseleko - Yiba yiCrime Smart nge-Semalt
I-Intanethi igcwele abantu abahlukeneyo abaneenjongo ezininzi. Uninzi lwabantu lubekweiiwebhusayithi zezorhwebo kunye neeblogs, abanye bahlala betyala ixesha labo ekwenzeni iindlela zokwenza izenzo zabo ezingekho mthethweni. Xa senza iwebhsayithi,sigxininisa ekuhanjisweni kweenkonzo kunye namava umsebenzisi aziva njengoko basebenzisa isayithi lakho. Uninzi lwezixhobo zokuphuhlisa iwebhukuquka ukuthengiswa kwe-intanethi kunye neempawu zokupakisha ezifana ne-Search Engine Optimization (SEO), uphuhliso lwe-UX kunye nophuhliso lwezintoizakhiwo ezifana nophuhliso lwewebhu - enviar formulario php.
Izixhobo ezigqebayo zisetyenziswayo ziyaqhubeka, kwaye ziqhubeka ziphucula kwaye zibheteleukusuka kwiinguqulelo zangaphambili njengoko ixesha lidlulayo. Kubalulekile ukuhlala uqaphela iindlela zokugqithisa abantu kunye nezinye iindlela ezisebenzayokwintsimi yokukhwabanisa kunye nokuphucula ukhuseleko lwe-intanethi ukusetshenziswa. Ubuninzi bebuqhetseba bewebhu bujikeleza kwimisebenzi yabatyekikunye nogxeke.
Kubalulekile ukuba ufunde ezinye zezi hlaselo kwaye uhlale ukhuselekile kubo.
uJason Adler, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,ichaza ngokuhlaselwa kobuqhetseba be-intanethi.
Olu lwaphulo-mthetho lubandakanya ukuthumela imiyalezo kunye ne-imeyile eneenjongo ezingalungile.AbakwaScammers basebenzisa iindlela ezifana nokuhlaselwa ngamatyala okanye ukuhlaselwa. Kwamanye amaxesha, abakwa-scammers basebenzisa izixhumanisi ezinokulimazaokanye ukusebenzisa ii-virus. Bangathumela izikhonkwane eziqulethe iTrojans. Xa uvula, unokuchaphazela isiphequluli sakho kwaye uthathe amaninzi amaphasiwedi womsebenzisikunye nolunye ulwazi lomntu. Kubalulekile ukusebenzisa izihlungi eziphambili ze-spam kunye nokusebenzisa umniki-imeyili okhuselekileyo..Qinisekisa iiphasiwedi zakhozomelele kwaye iiplagizi zisesikhathini.
Olu hlaselo oluhle lusebenzisa ithuba lokufumana iiwebhusayithi ezikhohlakeleyo. Abanyeiiwebhusayithi enekhowudi ye-PHP ine-SQL. Ezinye zeenkcukacha ziyakwazi ukufikelela ngokude usebenzisa le ndlela yokukhangela. Ngaphezu koko, iSQLijoyiki inokuvumela i-hacker ukuba ifunde lonke ulwazi olukhoyo kumncedisi kwiikholamu kunye nemigqa. Oku kuxhaphaza kunokukwenza i-website ibe yingozi.Ezinye zeenkcukacha ezinokuphelisa ngale ndlela ziquka ulwazi lwekhadi lesikweletu.
I-Cross Site Scripting (XSS)
Olu hlaselo lwenza ezinye zeentengiso ze-intanethi ezixhaphakileyo. XSS isebenzisaAmasimu okubhala ukuba asebenze iempendulo kwiwebhusayithi eyahlukileyo. Ngokungafani nokuhlaselwa kwe-botnet, i-XSS iyafikelela kwi-database eyenza amava onke aphefumulayobuhle. Hackers bangaba ukweba ulwazi lwekhadi lesikweletu nge-XSS. Kwamanye amaxesha, abantu banokuyithintela ukhuseleko lwewebhusayithi ngokukhwabanisa. Ukongezelela, imizamo ye-SEO ayikwazi ukuvelisa iziqhamo kwisayithi apho iinjongo zokukhangela zicinga ukuba zikhuselekile.
Intanethi igcwele iingxaki ezininzi kunye nemiba. Ngaphezu koko, kukho ezahlukeneyoiinjongo kunye neenjongo emva kwabasebenzisi abaninzi be-intanethi. Ininzi yesakhiwo sewebhu senzeke ngaphandle kwabahlaseli kunye nobuqhetseba kwi-intanethi. Ngenxa yoko, iUkukhwabanisa kwiimpawu zewebhsayithi kugxile ekwenzeni ukuhanjiswa kweenkonzo kwakunye nokusebenza kakuhle kokuthenga isayithi kakuhle. Nangona kunjalo, kukhoamanyathelo amancinci ukugcina abahlaseli. Unokuhlala kude nenkohliso ye-intanethi usebenzisa ezinye izicwangciso kule khokelo. Ngaphezu koko, unakoubuyisele ukhuseleko lwamava okukhangela kwakho kunye nezinye izinto ezichaphazela ukhuseleko lwabaxumi bakho.